Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 59aad | Jowhar Somali News Leader
Home LOVE STORY Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 59aad
Halkii ayaa lagu soo abaaray xaafada Samiira intii la soo socday mar kasta xaaladiisa ayay weydiineysay Qadarna tani waxay ku sii adkeyneysay in damiirkiisa uu sii cinqaabo isaga oo isku ciilgaambinaayey sida uu xumaanta ula doonay iyo sida ay naftiisa muhiimka ugu tahay oo ay ugu fikireyso.
Qadar wax kale ma heynin ee damiirkiisa ayaa cinqabayey ereyadii dareenka lahaa ee heestii Jaceylka Astaan u noqo ku jirtay ayaa indhaha u furay dareensiiyeyna in uu wado xun haayey.
Xaafadii markii la soo gaaray ayay guriga soo gelisay oo ay qolka fadhiga fadhiisiyey hooyo Farxiya oo la yaabtay sida dhaqsiyaha leh ee loo soo laabtay ayaa u soo gashay waxayna markiiba indhaheeda qabteen Samiira oo gacanta Qadar ku xereyso makiinada dhiiga lagu cabiro iyada oo naxday ayay la soo booday.
Samiira Hooyo maxaa helay wiilka
Hooyo ma aqaan mar kaliya ayaa uu sidaan noqday jirkiisa oo dhan ayaa qaboobay
Maxaa sababay Qadar Maama maxaad dareemeysay
Waan fiican nahay ee Samiira iska cabsaneyso xaalkayga ma xuma
Waxba ma fiicnid ee dhiigaaga waa uu hooseeyaa ee biyaha cab waa in aan biyo badan cabtaa
Prof Muumin oo galay ayaa yiri
Haddii ay sidaa tahay waa in aan faleepo surnaa si kor aan ugu qaadno dhiigiisa
Ilaa xadkaas uma darna biyo badan haddii uu cabo waa ay ku filan tahay Aabe
Intaas oo hadal intii la is weydaarsanaayey Qadar qalbigiisa ma joogo waxa uuna ka fikarayaa sida wanaagsan ee loola dhaqmayo ee loo ogaanayo iyo waxa uu damacsanaa caawa illaahow adiga ayaa mahad leh ayaa uu qalbiga ka lahaa oo xumaanta iga fogeeyey waxaase markii dambe la hadlay Prof Mumin oo yiri.
Qadar ii waran wiilkayga ka waran xaalkaaga
Waa fiicana nahay adeer
Maxay tahay waxa laguu soo sheegay ee heerkaan ku soo gaarsiiyey
Wax dhib ah ma jiro Adeer waa wax iska sahlan
Wax sahlanma jiraan Qadar markii hore telefoon ayaad ku hadashay lacag Ayaan Akoonka ka fiiranyaa ayaad igu tiri xaaladaan waa gashay wax waa ay jiraan ee sidee wax u jiraan.
Haa wiilayga noo sheeg waxaan kula qaban karno Ayaan ka qaban laheyn
Qadar oo ay ku adag tahay inuu runta sheego ayaa isu sheegay inuu wax uun u sheego reerkaan haddi kalana aysan ka hari doonin su’aalahaan badan waxa uuna ku yiri.
Adeer waa arrimo ganacsi
Qasaare miyaa jiro
Is deji wiilakya adduunyadaan wax walba waa la arkaa naftaada lacag darted Qatar ha u gelin ma fahamtay waana iska hagaajayaan caawa qolka martida ayaa laguu diyaarinaa iska seexo.
Waad mahadsan tahay hadda in aan wanaagsan nahay Ayaan dareemayaa
Haddii ay sidaa tahay darawal ayaa ku kaxeynayo oo xaafada kugu soo simayo
Intaas oo dhan ha is dhibina iminkaana idiin mashquuliyey waana ladanay waana bixi karaa adeer
Inshah allah Caafimaad wiilkayga
Hooyo Farxiya iyo Prof Mumin markii ay arkeen inuu wanaagsan yahay ayay ka tageen oo isaga iyo Samiira isku dhaafeen Qadar oo weli ka xishoonayo inuu wejiga Samiira fiiriyo ayay ku a tiri.
Haye Qadar hadda side dareemeysaa
Aad Ayaan fiican nahay
Qasaaraha waa side bal ii sheeg ma fahmin ma lacagtii akoonka ka fiiri lagu miyaa la dhacay mise wax kale ayaa jira.
Ganacsi aniga ii gaar ah ayaa jiray oo aan aabahay ka warheyn kii ayaa ninkii lacag ku shaqeynayey ayaa la la yahay fariin ii soo dhacday ayaa la igu sheegay.
Inshah Allah Yasir Kheyr
Qadar markii uu in cabaar ah fadhiyey ayaa uu u sheegay Samiira inuu fiican yahay oo uu bixi karo wallow Samiira aysan ku kalsooneyn inuu baabuur kaxeyn karo oo ay ku tiri.
Kaalay adiga sow wiil saxiibo ha ma lihid u yeer si uu baabuurka kugu kaxeeyo
Cabsidaas oo dhan ma jirto waa kaxeyn karaa waana balan markii aan guriga tago waan ku soo wacayaa.
Sidii ayaa lagu qanciyey Samiira kuna fasaxday Qadar Hooyo Farxiyo iyo Aabe Mumin ayuu hore u sii macasalaameyey kagana mahadceliyey sida ay ugu dadaaleen waxa uuna baabuurkiisa ka soo saaray cashadii oo uu Samiira u dhiibay kana raali geliyey in habeenkoodii ugu horeeyey uu xaalka sidaan noqday waana ay ka aqbashay sidii ku baxay oo uu xaafadiisa ku aaday.
Previous articleC/raxmaan C/shakuur “Khudbadii Madaxweynaha waxaa ka muuqday daan daansi dagaal iyo jees jees”
Next articleGaadiidleyda Xamuulka ee Gobolka Banaadir oo cabasho ka keenay cadaalad darro lagu sameeyay